ဒီတစ်ခါ အလှူပွဲက ဓါတ်ပုံရိုက်စရာ နေရာကကျဉ်းတာနဲ့
ရိုက်လို့ရသမျှထဲက ကောင်းမယ်ထင်တာလေးတွေ ရွေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
သာဓု သာဓု သာဓုပါ ဗျာ။
နေရာကျဉ်းပေလို့ ပဲဗျို့.. ရိုက်ချက် တွေက ဖျားလောက်တယ်။ ကိုယ်တိုင် မလာနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ .. ဒါ့ထက် … အူး ဘလက်ချော ဆိုတာ ဘယ်သူလဲဗျ .. ဘယ်ပုံ မှာပါလဲ .. အဲဒါလေး သိချင်လို့ပါနော့ ………။
ဦးဘလက်ပါတဲ့ပုံ ဒီမှာ ရှိပါတယ် …. ။ လက်ဖဝါးပြလျှင် လျှက်စားရပါမယ် .. အဟိ ဟိ … ။
ကိုလုလင်လာမယ်ဆိုပီး …… တော်သေးတယ် လေးဘလက်ကရိုက်ချက်ကောင်းသွားလို့အားလုံး ပါလာတာ …..
ကျနော်လဲ အားရ ဝမ်းသာ အလှုူ ့အတွက် ကြည်နူးရပါတယ်ဗျာ။
သာဓု ခေါ် ပါတယ် .. မလိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် ပုံတွေကိုပဲ အားရပါးရ ကြည့်လိုက်မယ်နော် ..
ခု တွေ့လိုက်တော့လည်း ကို အရင့်ရောင် တစ်ယောက် တော်တော် ပိန် သွားသလိုပဲနော် ..
ကိုအရင့်ရောင်ပိန် သွားမှာပေါ့ အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေလို့လေ စနိုးသူဆီကအကြွေးသိန်း ၁၆၀ဝ ရစရာရှိတယ် သုံးလကျော်နေပြီ ခုထိလာမပေးသေးဘူး
ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ရွာသူားများနဲ ့အလှူရှင်အားလုံးရဲ ့စေတနာသဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာ ပြုခဲ့တဲ့ အလှူအတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု သာဓု သာဓု လို ့ခေါ်ပါတယ်ဗျို ့။
သိချင် မှတ်မိချင်ရင် ရွာသူားတွေရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေကို ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်နော။
ကိုယ်တိုင်လာရောက်ချင်ပါတယ် မမခင်ဗျာ။ အခြေအနေတွေမပေးသေးလို့ပါ။
ရခိုင်ဆိုကေ မြင့်မြတ်တေ ဇာနီရာကိုရောက်ရောက် စုစည်းနေရေ….. ဇာနိုင်ငံ ဇာမြို့ကမဆို ရခိုင်ဆို ရခိုင်ရာ ရက္ခိတ တော်ဝင်သဇင် …. ဇာလူကမြင့်မြတ်တေ .. အသူနိမ့်ရေ ပိုင်လို့မထား ကွဲပြားရေမယှိ … အတူတူတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အငြိုးနန့် .. အမုန်းမထား လက်တွဲလားကတ်ဖို့ရာလေ ….
(ဝင်ကိုခိုင် – သီချင်းမှစာသားများဖြစ်ပါသည်)
ဂေဇက်ရွာသူားတွေ စုပေါင်းပြီး အလှူတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တာ ဝမ်းသာစရာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။
စည်းလုံးညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ ကြရပါပြီ။
ရှေ့သို့ဆက်လက် ညီညီညာညာ ချီတက်ကြပါစို့။
(ကြောင်ကြီး ပြောသလို အလှူခံပွဲတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သည်းသည်း ဆင်နွဲကြပါစို့)
ပထမအလှူ၊ ဒုတိယအလှူ၊ တတိယအလှူမှ နောင် အလှူပေါင်းများစွာ စည်းလုံးညီညာ စုရုံးကာ ဆက်လက်စွန့်ကျဲ လှူပွဲကြီးတွေ ကျင်းပသွားကြပါစို့ ရွာသူားများ ခင်ဗျား…..
ကိုယ့်ဆရာများက ကွန်မင့်ထဲတင် ရွာသူားလို့ သုံးရုံမကဘူး.. ဗီနိုင်းထုတ်တဲ့ပုံမှာကို အဲလိုရေးထားကြတယ်
မန်းဂေဇက်ရဲ့ Trade Mark လေ ကိုရွာစားကျော်ရဲ့ .. ဆိုင်ကလည်း ပြင်လိုက်ရမလား မှားတာလားတဲ့ .. :grin:
ရွာသူနဲ့ ရွာသားကို စည်းမခြားပဲ တပေါင်းတည်းထားတဲ့ သင်္ကေတလေးပေါ့။
ဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ …. ယခုကဲ့သို့ နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာ အသက်ရှင်သရွေ့ ရွာကြီး တည်ရှိနေသမျှ လှူဒါန်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် …..သတင်းစာထဲပါထည့် ကြော်ငြာလိုက် ရွာလူဦးရေ တိုးလာမှာသေချာတယ် ….. ရွာထဲက လူကြီးတွေ အားလုံးသာဓု ခေါ်နိုင်အောင် အမျှဝေပေးပါ ..
(2) အလှူငွေပေးနေတုန်းကို မျက်စေ့ကို ချစ်သူလိုက်ရှာနေတယ်နော်
( တုန်ရေ အဲသည်လောက်တောင်ချစ်တာနော်)
(3) နောက်ကနေ ကလေးလေးတစ်ယောက်ချောင်းကြည့်နေတယ်ဗျာ။
(4)အစွန်ဆုံးက အကျီအနီနဲ့ကလေးလေးက ဘယ်သူ့လှမ်းကြုနေလဲမသိဘူး။
ဟိုကြားထဲက အပြွတ်ကလေးကလဲ သူ့ချစ်ချစ်ကိုလှမ်းရှိုးနေတယ် အံ့ရောအေ။
(6)ဇွတ်ကို စနက်တွေရှောြ့ပီးလက်ဆော့နေလိုက်တာ ကိုပေါက်အမျုးိနဲ့တူတယ်။
(7) အကျီမဲနဲ့လူဝကြီး က ကပြနေတယ် ဟိုကောင်လေးကလဲ ပုတာလူမသိအောင်ခုံပေါ်တပ်ရပ်နေတယ်။
ဟိုဘောင်းဘောင်းနဲ့ ကလေးမလေးက ဘယ်သူနဲ့ပါလာတာလဲ။
(8) အစွန်ဆုံးကဘောင်းဘီတိုနဲ့ ဘယ်က ယောကျာ်းဗိုက်ကြီးသည်ခေါ်လာတာလဲဟင်
(9)ပုံစံက ဖဲရိုက်မလို လူစုနေတာကြနေတာဘဲ(တောင်ကြိးက အာလူးသီးလေးက ဘယ်လို့လိမ့်လာတာလဲ)
(11 ) သူ့ကိုမင်းသားလာငှားမှာစိုးလို့ ရုပ်ဖျက်ထားရတယ်လို့ဖုန်းဆက်သွားတယ်ဗျာ
(13) လူကြီးတွေစိတ်ညစ်အောင်ရန်ဖြစ်တုန်းက ဖြစ်
ကျနော်မလိုက်ရသည့်အတွက် ပေါက်ကရ ရေးပါသည်။
လေးပေါက်…. အမီး အဲမနက်မှ တောင်ကြီးကနေ လိမ့်ဆင်းလာတာချင့်..
မအိပ်ပဲ…. အဆောင်ရောက်ရေချိုး …မေလ်းစစ်ပြီး ကိုအမတ်ကိုဖုန်းဆက်
အဓိပတိအနီ စီးပြီး ရောက်သွား…
ပျော်လို့ …. အိပ်ဖို့တောင်မေ့တွားတယ်…
လေးပေါက်ကြီးကို သတိရလိုက်တာ ……. မန်းလေးလာရင်တော့ ရွာသူားမန်းအဖွဲ့နဲ့တော့ဆုံ ချင်တယ် …. လေးပေါက်ကြီးစီစဉ်ပေးဦးနော် …….
ဦးဘလက်ပုံလေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဗျို့ မမြင်ဘူးလို့ပါ ဟီဟိ
ဒါ့ပုံဆရာ ဦးဘလက်ကြောင့် အကျွုန်ုပ် ယောကျင်္ားစစ်စစစစစစစ် မှ ဗိုက်ကြီးသည်ဖြစ်ရပြီ ဦးဘလက် ရှင်းပါလော့
ဘယ်သူနဲ့ ပြထားလဲ ဘာလေးလဲ သိရဘီလား :grin:
ကိုယ့်ရွာသားတွေရဲ့ အလှူကို မြင်ရပြန်တော့လည်း
ကိုကမ်းကြီး အခု ဘယ်ရောက်နေလို့တုန်း ။
ကိုကြီးကမ်းလာမယ်လို့ထင်ထားတာ အဲနေ့မှာ ကိုကမ်းလှူထားတဲ့အလှူငွေဖြတ်ပိုင်းလည်းပေး ချင်လို့တောင်ယူလာတယ် ….. သူကမလာဘူး ……..
၁ ။ လှူဒါန်းချင်နေတဲ့ အလှူတစ်ခု အောင်မြင် သွားတဲ့အတွက် ပီတိဖြစ်ရပါတယ် ။
၂ ။ ရွာသူား များကိုလည်း စည်းစည်းလုံးလုံး တွေ့ရတဲ့ အတွက် ဝမ်းသာလှပါတယ် ။
၃ ။ ဒီလို အလှူ အောင်မြင် အောင် ဦးဆောင်ပေးခဲ့သူတွေရဲ့ စေတနာနှင့် အနစ်နာခံမှုတွေကို
လှိုက်လှိုက် လဲလဲ ( လှိုက်လှိုက် လဲလဲ ) အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ။
၄ ။ ငွေအား ၊ စိတ်အား နှင့် ပါဝင် လှူဒါန်း ထောက်ခံပေးခဲ့ကြတဲ့ ရွာသူား အားလုံးကိုလည်း
ကျေးဇူးတင်ပြီး သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ပါတယ် ။
ရွာသူတွေ အားလုံးက အချောအလှတွေကြီးပဲနော် ။
ဒီလို ဒုက္ခမျိုး ကြုံသူတွေလဲ ဒုက္ခကလွတ်ပါစေ။
ဒါမျိုးတွေ လဲ ထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကိုယ့်ရွာသူ/သား တွေအားလုံး က ချစ်ဖို့ကောင်းကြတယ်။
ဦးဦးပါလေရာ ဆိုတာကို ဖိုးပါကြီး ပုံစံ မှန်းထားတာ လွဲသွားတယ်။
ဓာတ်ပုံ လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကဘချော ရေ။ :-)
နောက်တစ်ကြ်ိမ်တော့ …. အဟင်း…..။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ပါဗျာ
အလှူပွဲပြီးတော့ သာမီးတို့(ကလေးအုပ်စု) အင်းယားမှာအကြော်စားပြီး
စည်းလုံးခြင်းရဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကို .. မျက်မြင်တွေ့ရခြင်းပါပဲ … ။
စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာက … ကိုထူးဆန်းကြီး .. ကိုုယ်ရောင်မပြတာပါပဲ … ။
ဒီပုံတွေထဲမှာ .. လေးဘလက်လည်း မပါဘူး ။ ဦးဦးပါလေရာလည်း မပါဘူး … ။ စာဖတ်သူ .. ကိုဝင်းလည်း မပါဘူး … ။
မမခိုင်တော့ …. မိသားစုပုံလိုက်ကိုပါပြီနော် …. ။ ဟီးဟီး …
ရှက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော် လူဇိုး မို့လို့ ပါ … ခွိခွိ.. :grin:
ဘဘ ဘလက်လိုတော့ ဝန်မခံဘဲနဲ့ ….
အင်းဟုတ်တယ် …… အတွေးကောင်းတဲ့ ကိုထူးဆန်းပုံကိုမြင်ဖူးချင်တာ …… ခုတော့ မမြင်လိုက်ရဘူး ….
ဒီအထဲ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေအားလုံးဟာ
ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးမှ တင်ထားတာပါ နော့။
ဦးဘလက်ချော တို့ကတော့ အသက်တွေကကြီးကြပြီမို့
(အသားမည်းမို့ လူထဲထွက်မပြချင်တာက များများ။ ဟေးဟေး။)
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ အရမ်းကို ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်
အခုလို သွားရောက်လှူဒါန်းတာကို သာဓုခေါ်ပါတယ်ရှင်
အလှူအတွက် ဝိုင်းဝန်းလှူတန်းကူညီပေးကြတဲ့ ရွာသူားများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒ တလုံးတဝ ပြည့်စုံပြီး လွတ်လပ်အေးချမ်းတဲ့ ဘဝများစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ……
အလှူလာကြတဲ့ ရွာသူားများကို မောနင်းစတားမှာ စားသမျှ ရှင်းပေးတဲ့ ဦးပါလေရာ နှင့် အလှူပြီးတော့ အကြော်လိုက်ကျွေးတဲ့ မနိုဗွီ တို.ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…(မလိုက်တဲ့သူတွေ အားမလိုအားမရဖစ်အောင် ညှော်သည် ဟီးဟီးဟီး)
အကြော်လိုက်ကျွေးတဲ့ ကိုရဲစည် ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား
မနို အကြော်ဖိုး ရှင်းဘို့ကောင်တာရှေ့လည်းရောက်ကော
လက်မြန်သော ရဲစည်ကလေးက ရှင်းပြီးဖြစ်ပါကြောင်း
မတိုက်ရေ …… မသိရင်တော့ မနိုကိုသာမေး ….. သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကိုရဲစည်ကို လက်ဆောင်ပေး လိုက်မယ် …….. ငါတော့မေ့လို့မရတော့ဘူး ….. နှစ်သောင်းခွဲ ……ငါတော့မေ့လို့မရတော့ဘူး ….. နှစ်သောင်းခွဲ ……ငါတော့မေ့လို့မရတော့ဘူး ….. နှစ်သောင်းခွဲ …… ဟဲ ဟဲ ..
အဲဒီနေ့နေ့လည်ကအခန်းမှာနေရင်းသတိတရသာဓုခေါ်နေမိပါတယ်။ နေမကောင်းလို့လူကဘယ်မှမသွားပေမယ့်စိတ်ကတော့ရောက်သွားပါရဲ့ အခုအချိန်ဆိုလှူနေပြီဆိုပြီးလေ…။
ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ် သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ပါ။
ဒီတစ်ခါ မလှူလိုက် နိူင်ဘူး ဗျာ…
နောက်တစ်ခါ အခေါက်တွေ အတွက် အားခဲရင်း သာဓုသာ သုံးကြီမ်ခေါ်ပါရစေ…
ဟိုဆု အတွက်လည်း လုပ်ဖြစ်ပါစေ ဆုတောင်းရင်း ကိုချောကို ဆက်သွယ်ရမယ့် ဟာလေးတွေ ပေးဖို့ တောင်းပါရစေ။
မမောနိုင်မပန်း နိုင် အဓိက ပါဝင်လှုပ်ရှားကောက်ခံပေးသွားတဲ့ လေးပေါက် ၊ ကိုရွှေတိုက်စိုး၊ ကိုအမတ်မင်း၊ နှင့် ကိုရွာစားကျော်တို့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင် လေးစားပါတယ် .. ကိုယ်ဖျောက်နေတဲ့ Mလုလင်ကောပေါ့။။
အလှူကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီး အားခဲထားတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး မသွားဖြစ်ခဲ့တာ နောင်တရမိပါ၏။
နောက်တလှူအတွက်အားခဲထားပါ၏။ လှူဖို့ရော၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့ပါ။
နိုဗွီဂလေး အကြော်ကျွေးတဲ့ဆိုင်က သူနဲ့ဦးကြောင် တချိန်က ကျောင်းသားဘဝ အတူစားခဲ့ဒဲ့ ဆိုင်ပေါ့ကွယ်..။ ဂုများတော့ အတိတ်ဟာ လိပ်ပြာ အရိပ်ပမာ ပြိတ္တာ
နိုဗွီကလေးလဲ ဥကြောင် ကိုလွမ်းခဲ့ပါတယ်
မနို ကြောင်လေးကတော့ ချောင်ပြေးပြီးငိုနေသတဲ့
ဒါ့ပုံရိုက်တဲ့လူတွေကများတော့ ဘယ်ကိုကြည့်ရမှန်းမသိဘူး ……. မျက်စိတွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ကျနေတာပဲ …… တကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အလှူပွဲလေးပါ ….. အလှူငွေက ထင်တာထက်ပိုရခဲ့တယ် ….. လေးဘလက်ရဲ့ရိုက်ချက်ကလည်း အံ့မခန်းစရာပဲ သမီးပုံပါမယ်မထင်ဘူး ပါတယ်တော့ …….
ကိုဘချောရဲ့ ပုံ13 ရိုက်ချက်ကြောင့်
ရခိုင်က ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မန်းဂေဇက် မိသားစုဝင်တွေရဲ ့အလှူကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
ကျမတို ့လည်း သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး အဝတ် ပီနံအိတ်ကြီးနဲ ့၈ ထုပ်၊ ငွေသား 174000ကျပ်၊ နဲ ့ကျပ် ငါးသောင်းဖိုး စာရေးကိရိယာနဲ ့ခေါက်ဆွဲခြောက် ၂ ဖာကို လှူဒါန်းပြီးပါကြောင်း ကုသိုလ်ကို မျှဝေပါတယ် ။
အာလုံးကို ကိုပေါက်က သိနေပါ၏။
ဒီတစ်ပွဲတော့ မနွဲ့လိုက်ရတာ နာလိုက်တာ။ နေမကောင်းနေတော့ မလိုက်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ အတော်စည်မယ့်ပုံ ဂုဏ်ပြုတာတွေတင်တဲ့သူရဲ့ ပုံတွေလည်း မပါပါလား… အတော်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်အလှူအတွက် သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဝမ်းသာစရာ သတင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပဲဗျို့။ သာဓုခေါ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ